မယ်ဆိုင်ဂူနဲ့ထိုင်းမင်းသားများ — Steemit
သတင်းတွေကဖတ်လို့တော့ကောင်းတယ်။စဉ်းစားစရာတွေလည်းများတယ်။စကားတွေကလည်းရှေ့နောက်မညီဘူး။အစကနေစဉ်းစားကြည့်ရင် ကလေးတွေဂူထဲဝင်သွားတာ တစ်ယောက်မှမတွေ့ခဲ့ဘူးပေါ့။ဂူစောင့်ကစက်ဘီးတွေနဲ့ ဖုန်းတွေ အိတ်တွေမြင်တော့မှ အကြောင်းကြားတယ်ပေါ့ ကျောင်းကို ။ကျောင်းကနေမှ မိဘတွေကိုအကြောင်းကြားတယ်။မိဘတွေကနေ အစိုးရကိုအကြောင်းကြားတယ်ပေါ့။ အလုံးအရင်းနဲ့လာကယ်ကြတယ် ဒီ(၁၃)ယောက်ကို။
သူတို့ကပြောတာ ဒီဂူထဲကိုသူတို့ဝင်ဖူးနေကြဖြစ်လို့ ကျွမ်းတယ် ၊ ဘာကိုမှမကြောက်ဘူး ၊ မွေးနေ့လုပ်ဖို့သွားတယ် ၊ အစားအစာတွေဝယ်သွားတယ်ပေါ့။ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မလောက်လို့ နိုင်ငံခြားကနေကျွမ်းကျင်သူတွေကိုခေါ်အကူညီနဲ့ရှာကြတယ်။တော်တော်လေးကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ ဂူထဲကိုလိုက်ရှာနေရတဲ့ video အခွေတွေထွက်လာတယ်။ဒါနဲ့တစ်ပတ်ရှာတာ မတွေ့ဘူး။နတ်တွေပင့်တယ် ပူဇော်ပသကြတယ်။ ဆရာတော်ကြီးကိုပင့်တယ်။ဗေဒင်တွေမေးတယ်။ဒီမှာ ဗေဒင်ကမမှန်ပေမယ့် ဆရာတော်ကြီးကပြောတာမှန်တယ်။နှစ်ရက်နေရင်ပြန်တွေ့မယ် ကလေးတွေအကုန်အသက်ရှင်နေတယ်လို့မိန့်တယ်။လူပေါင်းထောင်ကျော်ရှာတာ ဒီကလေးတွေကိုမတွေ့လို့ နတ်ဖွက်တယ်လို့လဲပြောကြတယ်။ဆရာတော်ကြီးပြောသလို နောက်နှစ်ရက်နေတော့ကလေးတွေကို တစ်စုတစ်စည်းထဲတွေ့ခဲ့ကြတယ်။စက်တွေမနည်းဘူး။လူတွေမနည်းဘူး။လေယာဉ်တွေမနည်းဘူး။
ဒီတော့စဉ်းစားစရာက သိပ်တော့မရှိသေးဘူး။ကလေးတွေအတွက် နိုင်ငံတော်တော်များများက သနားကြတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကို ချီးကျူးကြတယ်။ဒီအထိသိပ်ပြီးတော့တအားကြီးစိတ်မ၀င်စားသေးဘူး။ဒီနေ့မနက်သတင်းတွေ့တော့မှစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ကလေးတွေကို အပြင်ဆွဲထုတ်ဖို့ရာ လေးလကြာမယ်။လေးလစာအစားအသောက်တွေကို ကလေးတွေဆီပို့မယ်ဆိုတော့ကာ နည်းနည်းတော့များသွားပြီလို့ထင်တယ်။တကယ်ကအားလုံးတွေ့ပြီ။နည်းပညာလည်းပဲ တအားမြင့်နေတယ်။နိုင်ငံခြားအကူအညီလည်းပဲယူထားတယ်။တစ်ပတ်အတွင်းထုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ယုံကြည်ရမယ့်ကိစ္စပါပဲ။လေးလဆိုတာကျတော့ ကလေးတွေကိုရင်းပြီး အကြံအကြီးကြီးလုပ်နေတာသေချာသလောက်ဖြစ်ပြီ။သူတို့ပြောတဲ့ဆင်ခြေက ကလေးတွေကို ရေကူးသင်ပေးမယ်၊ကျန်းမာအောင်လုပ်ပြီးမှ အပြင်ထုတ်မယ်။ရေတွေဂူထဲမှာများနေလို့ ကလေးတွေကိုစိုးရိမ်ရတယ်ပေါ့။ဒါဆိုရင် ရေငုတ်သမားတွေနဲ့ ရေကူးဝတ်စုံ အသက်ကယ်အင်္ကျီတွေက ကယ်လို့မရဘူးလား။လက်ရှိအနေအထားအရ ဆေးကုနေရတယ် အားပြတ်နေတယ်ဆိုပေမယ့် သေချာကြည့်တော့ သူလိုကိုယ်လိုပဲအကောင်းချည်းပါ။အလွန်ဆုံးတစ်ပါတ်ဆို အပြင်ပြန်ထုတ်လို့ရမယ့်ကိစ္စကို ဘာလို့လေးလကြာမှာလည်း။တစ်လဆိုမယုတ်မလွန် လက်ခံကြမယ်။လေးလဆိုတာ ဘာအတွက်များလည်း။
အဓိက ကတော့ လေးလအတွင်းမှာ သူတို့ဂူထဲမှာဘာတွေလုပ်မလည်း။ရေစုပ်ထုတ်မယ်တစ်ခုထဲလား။လေးလဆို မိုးလည်းကုန်ပြီ။အထင်အမြင်များစွာကွဲလွဲနိုင်ပေမယ့် သိသိကြီးနဲ့ငြိမ်နေကြတာ နိုင်ငံတကာက ဘာလို့များလည်း။ဒီဂူကိုသူတို့ဘာအတွက်အသုံးချမလည်း။တချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်စပ်နေလို့ မြန်မာပြည်အတွက်စိုးရိမ်ကြလေရဲ့။တချို့ကလည်း မသိသလိုနေနေကြတယ်။တချို့ကလည်း မြန်မာအချင်းချင်း အပြစ်တွေတင်နေကြတယ်။တချို့ကလည်း ကျွန်တော့်လိုစဉ်းစားနေတဲ့သူတွေကို တော်တော်ဥာဏ်နည်းပြီးတော့ သနားကြင်နာမှုမရှိတဲ့ကောင်လို့ ထင်နေကြမယ်။
ဒီတော့ 88 အရေးအခင်းတုန်းက တိုက်ပိတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေက ရယ်နေကြတယ်။အလင်းမရှိတဲ့နေရာ အောက်ဆီဂျင်နည်းတဲ့နေရာမှာ အလင်းကိုသူတို့မကြောက်ခဲ့ဘူး။သူတို့တုန်းက သုံးရက်ထဲပိတ်တာ။ထမင်းတစ်နပ်ကျွေးတယ်တနေကုန် ၊ အပေါ့အလေး ဒီနေရာမှာပဲသွားရတယ်။ဒီကလေးတွေ 10 ရက်တောင် ဘယ်လိုနေလည်း။ကျွန်တော်လည်းစဥ်းစားကြည့်တယ် ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရေတွင်းတူးတုန်းက လူတွေအောက်ရောက်လေ အသက်ရှူ ကြပ်လွန်းလို့ တွေ့ရတာမသက်သာဘူး။အပေါ်ပြန်တတ်လာရင် 10 မိနစ်လောက်ခနအသက်ကို၀၀ ရှူပြီးတော့မှ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။သူတို့ကိုမေးကြည့်တယ် ဒီလိုဂူထဲမှာ နေရရင် ဘယ်လိုနေမလည်းပေါ့။ သူတို့ပြောတယ် တအားအေးပြီးတော့ ခြေထောက်ေတွလုံးဝလမ်းလျှောက်လို့ရတော့မယ်မထင်ဘူး။ အစာသိပ်မစားရလို့ မသေသည့်တိုင် 10 ရက်ဆို မေ့မျောနေလိမ့်မယ်တဲ့ဗျ။ဘယ်ဟာတွေဟာဘယ်လိုတွေလည်းဆိုတာ လုပ်ဖူးတဲ့သူတွေသိတယ်။ကျောက်တွင်းတူးတဲ့ သူတွေမေးကြည့်တယ်။အများဆုံး သုံးရက်နေဖူးတယ်။စားစရာနဲ့ရေအလုံအလောက်ထည့်သွားတယ်။အနွေးထည်နှစ်ထပ်ဝတ်တယ်။ဒါတောင်မှ ပြန်တတ်လာရင် လူရုပ်မပေါက်တော့ဘူးလို့ပြောကြတယ်။
နတ်ထွက်တယ်ဆိုတာကြားဖူးတယ် ငယ်ငယ်က။တစ်ဖွဲလုံးကစားတဲ့အခါမှာ မမြင်ရအောင်တစ်ယောက်ကိုဖွက်ထားတယ်ပေါ့။အခုကတော့တစ်ဖွဲ့လုံးဖွက်ထားတာ ဆန်းကြယ်လွန်းတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လေးရက်နဲ့ထုတ်လို့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးကို လေးလထားမယ်ဆိုတာတော့ စဉ်းစားစရာပါပဲ။စာဖတ်သူတို့အမြင်လည်းပြောပြသွားပါဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
myanmar news writing blog
kolinn (54) · last year
​လေးလကြာတယ်​ဆိုတာ ​ကောလဟာဟသတင်း​တွေပါ မဟူတ်​ပါဘူး၊ ဒီသတင်းကို အဆက်​မပြတ်​ ​လေ့လာ​စောင့်​ကြည့်​​​နေပါတယ်​၊ ထိုင်းသတင်း မီဒီယာ​တွေက​နေ ​ပြောတာဆိုတာလည်း မရှိပ်ါဘူး၊ ဆိုးတာက မြန်​မာဘက်​က​နေ ဘူမသိကိုးမသိပဲ အာ​ချောင်​​နေကြ​တေ့ာ သတင်း​တွေက ကား​နေတာပါ
kolinn (54) · last year (edited)
ကျ​နော်​​ပြောပါတယ်​ မြန်​မာဘက်​က​နေ သတင်းကို ချဲ့ကား​ရေးပြီး အထအန ​ကောက်​​နေကြတာပါ၊ ရှာ​ဖွေ​ရေးပြီး​တေ့ာ ကယ်​ဆယ်​​ရေးလုပ်​တဲ့အချိန်​မှာ အချိန်​မည်​၍မည်​မျှကြာမည်​မသိ​သေး​တေ့ာ လိုလိုမယ်​မယ်​ ​စားစရာ ​လေးလစာပို့​ပေးမယ်​လို့ပဲ​ပြောတာပါ၊ ​လေးလကြာမယ်​ဆိုတာ တစ်​လုံးတပါဒမျှ မပါပါဘူး၊ မ​နေညကဆိုရင်​ တစ်​ညလုံး TVလိုင်းက​နေ ထိုင်းသတင်းမီဒီယာ​ကြေငြာသမျှ သတင်းများကို ကျ​နော်​ကြည့်​ဖြစ်​ပါတယ်​၊ ဂူက​နေ သတင်းတိုက်​ရိုက်​ တင်​ဆက်​​နေတဲ့ ကိုစည်​သူ​မောင်​က​နေပြီး​တေ့ာ ထိုင်းသတင်းပြန်​ကြားအဖွဲ့ကို ​မေးမြန်းထားတာလည်းကြည့်​ရပါတယ်​၊ အ​သေးစိတ်​ တစ်​စွန်း​တစ်​စ သိချင်​ရင်​​တေ့ာ ​အောက်​ကလင့်​မှာ ဝင်​ကြည့်​ပါခင်​ဗျာ..
ရှိကိုရှိတယ် အဲ့ဂူက ဘာထွက်တယ်ဆိုလားပဲ။မြန်မာနဲ့ဆက်နေတော့ ကလေးတွေကိုအသုံးချပြီးသူတို့ယူသွားမယ်ထင်တယ် မြန်မာကိုပေးစရာမလိုတော့ဘူး။
ဘယ်လို လှည့်ကွက်တွေမှန်း နားကိုမလည်တော့ဘူးရယ် ဒါပေမဲ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကို ကာဗာလုပ်ထားတော့ သိပ်ပြီးတော့လည်း မပြောရဲဘူး ဆရာတော်ရဲ့ သီလ သမာဓိကိုတော့ သံသယဖြစ်စရာ မရှိဘူးလေ
ဒီလိုထင်တယ် နက္ခတ်ကျနေတော့ အဲ့ရက်မှာရှာမတွေ့လို့ကမဖြစ် ဦးဇင်း အာ့ကြောင့် ဆရာတော်ကြီးရဲ့ သီလကိုသူတို့မကျော်ရဲဘူး။နောက်လေးလနေရမယ်ဆိုတာကတော့များတယ် တစ်ခုခုရှိလိမ့်မယ်။
ဒီ၁၃ယောက်က steemitထိ ရောက်လာပ့ကော ဟင့်
မြန်မာကလေးတွေမဟုတ်ဘဲ ထိုင်းကလေးတွေဖြစ်နေတော့လေ စိတ်ကိုမဝင်စားတာ😁
တစ်ခုခုတော့လုပ်တော့မယ်ထင်တယ် လေးလဆိုရင်တော့ ဟုတ်သေးဘူးနော့်မက်မက်ကိုရီးယား။
ကလေးလေးတွေက စွမ်းအားကြီးတာ ကလေးသေးသေးလေးတွေတောင် သန်သန်မာမာပဲ့
အစကတော့စိတ်မ၀င်စားဘူး လေးလစာ စားစရာတွေပို့ပေးမယ် ရေကူးသင်ပေးမယ်ဆိုတော့ကာ စိတ်မ၀င်စားလို့မရတော့ဘူးမမရေ။
Congratulations @zarmanizawlinn! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :
Congratulations @zarmanizawlinn! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :